Google Fi is selling Pixel 4a onasubscription plan now with 9$ per month. ﻿
Google Fi is selling Pixel 4a onasubscription plan now with 9$ per month.
Google Fi မှ Pixel 4a ကို တစ်လလျှင် အမေရိကန် ၉ ဒေါ်လာသာပေးသွင်းရုံဖြင့် ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် subscription plan တစ်ခုဖြင့် ရောင်းချပေးနေ
T-Mobile နဲ့ US Cellular တို့ထံမှ Cellular ဝန်ဆောင်မှုများကို Google Voice-style feature (ဥပမာ - web-based texts နဲ့ voice mail များ) များထည့်သွင်းကာ တဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချပေးနေတဲ့ Google ရဲ့ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google Fi ဟာ ယခုဆိုရင်တော့ ဖုန်းများကို ချက်ခြင်းပေးချေ၍ဝယ်ယူမည့်အစား subscription ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မည့် နည်းလမ်းအသစ်ကို offer ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ သင့်အနေနဲ့ ၂နှစ်ကြာစာချုပ်ချုပ်လိုက်ရုံနဲ့ Google pixel 4a ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါအချက်များကတော့ သင့်အနေနဲ့ သိထားသင့်တဲ့အရာများဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်တွင်တော့ Pixel 4a device တစ်ခုတည်းကိုသာ ရွေးချယ်နိုင်ဦဂမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံ contract ကတော့ Pixel 4a ($349) ကိုအပိုင်ရယူရန်အတွက် တစ်လလျှင် $9 ဖြင့် ၂နှစ် (စုစုပေါင်း $216) ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီး ကနဦးကြေး အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ Google က သင့်အနေနဲ့ subscription fee ကို ဆက်လက်ပေးသွင်းနေစေပြီး Pixel ဖုန်းအသစ်နောက် ၂နှစ်အကြာတွင်ထွက်ရှိလာတဲ့အခါမှာ upgrade ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် option များကိုလည်း ပေးအပ်သွားနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်။ ထို့နောက် အသစ်အသစ်သော ဖုန်းများတိုင်းတွင်လည်း ထိုသို့ပြုလုပ်သွားဖို့ကို မျှော်လင့်ထားဟန်ရှိပါတယ်။
ထိုနေရာတွင် “device protection plan” ဟုခေါ်တွင်သော အပိုဆောင်းရွေးချယ်နိုင်တဲ့ option တစ်ခုလဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီအရာကတော့ တစ်လလျှင် နောက်ထပ် $6 ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး။ ထို plan က “မတော်တဆ ဖြစ်သော ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ” ဖြစ်တဲ့ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ခိုးယူခံရခြင်းတို့မှ (New York မြို့အတွင်းနှင့် Warranty အတွင်းတွင် မပါဝင်သော ပျက်စီးမှုများမှအပ) အကာအကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီ တစ်လလျှင်ပေးသွင်းရမည့် အပိုဆောင်းပေးသွင်းငွေ $6 ဟာ သင့်ဖုန်းတစ်စုံတစ်ရာထိခိုက် ခဲ့ပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်သော်လည်း ကုန်ကျစားရိတ်အချို့ကို နှုတ်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pixel 4a အတွက် Google မှ ကြေငြာခဲ့တာကတော့ ဖုန်း screen အသစ်ပြန်လဲဖို့အတွက် $49၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက် $79 နှင့် သူခိုးခိုးခံရခြင်းအား ဖုန်းအစားထိုးပေးရခြင်းအတွက် $99 အသီးသီး ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Google က အဓိကအားဖြင့် သင့်ကို ဖုန်းအတွက်ပေးရငွေအပြင် အဆိုပါ service plan ကိုလည်း ဝယ်ယူစေလိုပြီး ထိုသို့ဝယ်ယူပါက တစ်လလျှင် $15 ဖြင့် ၂နှစ်စာအတွက် (စုစုပေါင်း $360) ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။